Medaly volamena 9 no azon'i Madagasikara. Namiratra isika teo amin'ny taranja fibatana fonjamby. Sivy no volamena azon’ny Atleta malagasy amin'izao, mametraka antsika eo amin’ny laharana fahatelo vonjimaika eo amin’ny fahazoana medaly aorian’i La Réunion sy ny nosy Maorisy, mpampiantrano ity Nosy andiany faha-10 ity. (Jereo Sary Tohiny)
Baolina miisa dimy no tafiditr’i Odion Jude Ighalo nandritra ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra (CAN), andiany faha-32, nifarana tao Egypta. Mpilalao ao amin’ny Super Eagles – Nizeriana i Odion Jude Ighalo, 30 taona izy, ary sambany no niatrika CAN. Milalao milaravinahitra any Chine, ary mpanafika ny toerany ao amin’ny klioban’ny Shanghai Greenland Shenhua. Niisa 102 kosa ny isan’ny baolina tafiditra tamin’ireo lalao niisa 52 nandritra iny CAN tany Egypta iny.
samedi, 20 juillet 2019 22:40
Kitra – Lalaon’ny Nosy: Nirava sahala i Madagasikara sy Seisela
Nisaraka ady sahala samy tsy nitoko ny Barea an’i Madagasikara sy ny Piraty an’i Seisela io toak'andro io. Nahazo "penalty" ny Malagasy saingy tsy maty izany. Lalao voalohany natrehin’ny Barea ny androany. Ny Club M (Les Dodos) Maorisianina no hifandona amin’ny Barea amin’ny alatsinainy ho avy izao.